नेपालमा पाइने तर नेपालीले राम्रोसंग नचिनेको यो अमुल्य औषधि, जस्ले महिनावारी गडबडी, क्यान्सर र अन्य यस्ता ठुला रोग निको पार्छ ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा पाइने तर नेपालीले राम्रोसंग नचिनेको यो अमुल्य औषधि, जस्ले महिनावारी गडबडी, क्यान्सर र अन्य यस्ता ठुला रोग निको पार्छ !
तीन बर्ष पुगेको कुरिलो खन्दा बढी फाइदा हुन्छ । बीउ संकलन गरिसकेपछि पहाडमा पौष माघ र तराइमा माघ फागुनमा खन्नु उपयुक्त हुन्छ । वनबाट कुरिलो संकलन गर्दा फेरि विरुवा आउन सक्ने गरि एकदुईवटा टुसा सहितको जरा छाड्नुपर्छ । खेति गरिएको ठाउँमा भने सबै खनेर फेरि लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
एक झाङ कुरिलोमा ५ देखि १०० वटा सम्म कन्द (जरा) हुन्छन । वनमा भएको एउटा बोटबाट तीन सय ग्राम देखि सात किलोग्राम सम्म काँचो जरा आउँछ भने खेती गरिएको ठाउँमा ५ किलोग्राम देखि १२ किलोग्राम सम्म काँचो जरा निस्कन्छ । खन्नासाथ जरालाई छहारीमा फिंजाएर राख्नुपर्छ । घाममा सुकाउँदा भित्रभित्रै चाउरी परि कालो हुन्छ र बिग्रन्छ ।
कुलमान र डा. रुइतले भने- अब ठूला परियोजना पूरा गर्ने काममा साथ दिनुस्
गरिबलाई हेप्नीः गन्हाउने चामल नगरपालिकाको गेटमै फ्याँके
खसी बोकाको मासूको नयाँ मूल्य निर्धारण : अब प्रतिकेजी